Sampana – Fiangonana Batista Biblika Ankadivato
Fiangonana Batista Biblika Ankadivato > Fanompoana > Sampana
Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny Fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana, nefa ny Tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, Izay miasa ny zavatra rehetra amin’ny olona rehetra
Ny Baiboly, 1Korintiana 12:4-6
Ny Sekoly Alahady eto Ankadivato dia tanterahina ny Alahady maraina aorian’ny fanompoam-pivavahana (10:45-11:30), mandritra ny enim-bolana voalohany. Manesy ireo filazantsara efatra mbamin’ny bokin’ny Asan’ny Apostoly ny Sekoly Alahady. Ny mpampianatra ny Sekoly Alahady dia miara-manomana aorian’ny fotoana fampianarana (11:30-12:00), ankoatra ny fanomanana manokana mandritra ny herinandro. Misy fotoam-piofanana tanterahina ho an’ireo mpampianatra amin’ny fiandohan’ny taona (Janoary).
Tompon’andraikitra voalohany: Rija Razafindrasolo, Sandy Ralambomanana
Ny Sekoly Asabotsy eto Ankadivato dia tanterahina ny Asabotsy tolakandro, amin’ny 2:00-3:30, mandritra ny enim-bolana voalohany. Manesy ny Testamenta Taloha ny Sekoly Asabotsy. Ny mpampianatra ny Sekoly Asabotsy dia tsy maintsy manatrika lasy fiofanana (faran’ny taona aorian’ny Krismasy) ary miara-manomana isaky ny Asabotsy aorian’ny fampianarana (3:30-4:30), ankoatra ny fanomanana manokana mandritra ny herinandro.
Tompon’andraikitra voalohany: Tiana Rajaona, Mbola Raharison, Vololona Ranjavelo
Ny Sampana Fiderana no tompon’andraikitry ny fanompoana rehetra izay mifandraika amin’ny hira sy ny mozika. Ao anatin’izany ny antoko mpihira, izay manompo ny fiangonana sy mitarika azy amin’ny hira isaky ny fanompoam-pivavahana Alahady maraina sy hariva, na amin’ireo fotoana manokana (antsam-panahy). Manana ny fotoany ny Alarobia hariva (6:00-7:00) sy ny Asabotsy tolakandro (4:30-6:00) ny antoko mpihira.
Tompon’andraikitra voalohany: Jean-Patrick Rakoto, Sandy Ralambomanana, Harison Ramanitriniaina, Tiana Ravanomanda, Sedera Ramahefalala, Jérémie Andrianarivo, Sébastien Rajoelina.
Tanora & Zatovo
Ny Sampana Tanora sy Zatovo dia mivory isaky ny Alahady tolakandro, aorian’ny fanompoam-pivavahana. Miompana amin’ny fitaizana ny tanora sy zatovo tsy ankanavaka amin’ny alalan’ny fampianarana ny Tenin’Andriamanitra mikasika lohahevitra manokana, toy ny finamanana, na ny fiadiana amin’ny ota. Misy fifanakalozana, fifampizarana sy fiombonana isaky ny fotoana.
Tompon’andraikitra voalohany: Jaona & Malalatiana Rakotoarimanana, Christian & Mikala Rajohnsonarinavalona, Cédric & Sandra Rajoelina
Manana ny anjara fivoriany manokana ny vehivavy, isaky ny Asabotsy maraina voalohan’ny volana (8:30-10:00), hianarany ny tenin’Andriamanitra sy hifanakalozana ary hiarahany mivavaka. Toraka izany ihany koa isaky ny Alakamisy tolakandro faharoan’ny volana, izay fianarana mahandro sakafo.
Tompon’andraikitra voalohany: Ianja Ralambomanana, Mamy Razakarivo, Eliah Ravoahangy.
Manana ny anjara fivoriany manokana ihany koa ny lehilahy, isaky ny Asabotsy maraina voalohan’ny volana (8:30-10:00), hianarany ny tenin’Andriamanitra sy hifanakalozana ary hiarahany mivavaka. Ankehitriny dia fianarana momba ny lehilahy fakan-tahaka araka an’Andriamanitra no ifampizarana.
Tompon’andraikitra voalohany: ny Loholona.
LAFATRA (Lehilahy Araka ny Fon’AndriamaniTRA)
Sehatra fampianarana sy fanofanana natokana ho an’ny lehilahy eo anivon’ny fiangonana, mba hahatonga azy ho mpitarika araka ny fon’Andriamanitra eo anivon’ny ankohonany sy ny fiangonana. Manana ny fotoany isaky ny Asabotsy maraina faharoa, fahatelo ary fahadimin’ny volana, amin’ny 6:30-9:00.
Tompon’andraikitra: Faly Ravoahangy – Fiaraha-miasan’ny Fiangonana amin’ny Madagascar 3M.